Mareykanka oo duqayn aargoosi ah ka fuliyay Soomaaliya
KISMAYO, Soomaaliya - Wararka laga helayo deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Dhexe ee Koonfurta Dalka Soomaaliya waxay sheegayaan in Gelinkii dambe ee Isniintii ay ka dhacday tuulooyin hoos-yimaada Buunda Araare duqan diyaaradeed.
Duqayntaan oo ay sameeyeen diyaaraddaha aan cidna wadin ee Mareykanka ayaa waxaa lagu beegsaday Saldhig la sheegay inay ku sugan yihiin dagaalyahanadda Al-Shabaab, sida uu ka dhawaajiyay masuul ka tirsan maamulka Jubbaland.
Wasiiru dowlaha Wasaaradda Amniga Jubbaland Maxamed Cabdi Kaliil, oo xaqiijiyay duqaynta ayaa tilmaamay in Duqayntaan ay jawaab u ahayd weerarkii ay Shabaab ee Saldhiga ciidamada xooga iyo kuwa maamulka ku leeyihiin tuulada Sanguuni.
Kaliil oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu ku daray inuu jiro khasaaro dhimasho iyo dhaawac ay duqaynta kasoo gaartay xoogaga Al-Shabaab, balse, ay qiimayn ku wadaan wali tirada saxda ah ee duqayntaan sababtay marka laga hadlo dhanka khasaarha.
"Duqaynta waxay dhacday Galabnimadii Isniinta, waxayna jawaab u ahayd weerarkii Shabaab ee Sanguuni. Waxaan beegsanay Saldhigyo ay iyaga maamulaan, marka khasaaro wuu jiraan dib ayaan kasoo sheegi doonaa," ayuu yiri Wasiiru dowlaha.
Dadka degaanka Araare oo siyaabo kala duwan ula hadlay Warsidaha Garowe Online waxay xaqiijiyeen inay maqleen Dhawaqa Gantaalo, oo ay soo rideyso diyaarad, iyagoo ku daray hadalkooda inaanu sheegin karin khasaaraha ka dhashay.
Al-Shabab oo mararka qaarkood ka hadasha duqamaha iyaga lagu beegsado wali wax qoraal ah kama aysan soo saarin duqayntaan la sheegay in lagu beegsaday Saldhigeeda duleedka Kismaayo.
Buundada Araare oo ku taala meel muhiim ah ayaa isku xirta Gobolada Jubbada Hoose iyo Jubadda Dhexe, waxaana ay tahay meel noqotay goob dagaal sanadihii udambeeyay, maadaama dhinacyadda iska soo horjeeday ay kordhiyeen howlgaladoodda.
Al-Shabaab ayaa kordhisay weerarada saldhigyada Ciidamada dowladda iyo kuwa...
Jubbaland oo war kasoo saartay weerarkii Saldhiga Sanguuni
Soomaliya 23.07.2018. 14:26
Al-Shabaab oo Weerar culus ku qaaday Saldhigga Sanguuni [Fahfaahin]
Soomaliya 23.07.2018. 11:52
AFRICOM oo war kale kasoo saartey Askarigii looga dilay Soomaaliya
Caalamka 18.06.2018. 10:08
Weerar ka dhacay duleedka Kismaayo [Akhari Fahfaahinta]
Soomaliya 19.06.2018. 15:25
Qarax ka dhacay duleedka Kismaayo [Fahfaahin + Sawirro]
Soomaliya 09.06.2018. 21:48
Guddoonka Golaha Shacabka oo ku biiray shirka murashaxiinta ee Muqdisho 23.11.2020. 20:07
Soo celinta maamulka hawada oo la xiriiriyey madax-banaanida Soomaaliya 23.11.2020. 18:08
Colaadda Ethiopia: Xoogaga TPLF oo burbruiyey garoon diyaaradeed 23.11.2020. 15:50
Bayaanka shirka murashaxiinta ee Muqdisho oo aad loo dhowrayo 23.11.2020. 15:14
Cawaaqibka ka dhalan kara muranka guddiyada doorasho ee la duray 23.11.2020. 11:11
Khasaaro ka dhashay roobab dabaylo wata oo ka da'ay Puntland 23.11.2020. 10:05